Zimbabwe News.Net - Top Africa stories Mugabe DRC Malawi
Harare - Germany has reportedly demanded compensation for land seized from its citizens during Zimbabwe's controversial land reforms, saying this was "an urgent and important issue".
According toNew Zimbabwe.com, Germany's ambassador to Zimbabwe Thorsten Hutter maintained that the issue of compensation was part of the re-engagement dialogue between the southern African country and the European Union.
Harare - The International Monetary Fund (IMF)is warning that excessive spending by President Robert Mugabe's government will worsen cash shortages and stoke inflation.
Harare - Will any top Zimbabwe officials actually send their children to the newRobert Mugabeuniversity that's being set up in honour of the 93-year-old president?
That's what Zimbabweans have been asking after the officialChronicle newspaperreported this week that the authorities had begun the process of "setting up" the new institution, which is being billed as a "smart" university likely to specialise in engineering.
Robert Mugabe " data-imageid="e9baf877-ec63-4038-a96c-40a4beeef7e7" data-smallsrc="http://cdn.24.co.za/files/Cms/General/d/596/26ece114aeab4e5a9857b9ca03aeac05.jpg" src="http://cdn.24.co.za/files/Cms/General/d/575/36f3d75e3afc4d45ba0bb43c1cd95f76.jpg" style="max-width:620px;" />
SA deports at least 300 Malawi illegal immigrants - report
Cape Town - South Africa has deported at least 300 Malawian citizens, who had been living in the country without proper documents, a report says.
According toNyasa Times, Malawi's deputy national spokesperson for the immigration department, Wellington Chiponde, said that half of the deportees arrived in the southern African country on Tuesday.